Haircut sikelo ashisayo wathatha ekuqaleni yayo eqinile Jaguar (eJalimane), okuyinto has engaphezu kwamashumi amane, umholi emakethe in ukwenziwa izinwele sikelo. sikelo Zezıhlabane Jaguar umelele zobuchwepheshe okungase umile noma yeselula. Push-inkinobho uhlelo lokulawula ikuvumela ukuba sizikhandle ukhethe lokushisa wazifunela izinwele anoma yiluphi uhlobo. Scissors ngokwazo akuzona evuthayo, kodwa ukudala lokushisa oyifunayo nabo izinwele. Kungani kunesidingo okusungulile ezinjalo sikelo?
Umlando amasevisi izinwele likhuluma zezinwele ezishisayo kusukela ezikhathini zasendulo. Akwaziwa ukuthi bezinwele babe okuyimpikiswano, futhi okwamanje nezinwele sikelo ashisayo kuza yayo aphoyintimenti - Ukwelashwa semikhawulweni yokuhlukanisa futhi izinwele ezilimele. Ukuchaza termostrizhki inzuzo phezu sikelo ezivamile, izazi zithi amathiphu izinwele, lonke nje anqunywe ngemva ukuwagwinya, ngesiswebhu ngokushesha futhi ephukile. Lokhu kwenzeka ngenxa ukulahlekelwa umswakama emiphumeleni amathonya zangaphandle zazo nakwezinye izimo ezimbi.
Ukuze ugweme lokhu, thina, ikhono iklayenti, wanikela ukugunda izinwele sikelo ashisayo. Ukukhulisa izinga lokushisa lapho ahlabayo izinwele, termonozhnitsy ukuvimba izici ezingezinhle "uphawu", ekusizeni izinwele ukuba zilulame ngokushesha, ukugcina umswakama kanye nezakhi. Ukudala ingcindezi ngaphakathi izinwele, imithi ashisayo neqhaza ukuze wandise ivolumu zezinwele. Ngokusho kochwepheshe, termostrizhka inikeza izinwele yokutakula, akhanye, amandla kanye kuyaqina. Awu, izinwele emva ukugunda izinwele sikelo ashisayo akuyona ngesiswebhu? Ngesiswebhu, kodwa ochwepheshe aveze ukuthi le nqubo sengezwe isikhathi kabili.
Kodwa masikhumbule ukuthi isimo izinwele zethu, isikhumba nezinzipho ngokuyinhloko kuthonywa umsoco ofanele. Ngakho-ke, thatha sikelo hot njengoba panacea for ziyaqothuka futhi emikhawulweni yokuhlukanisa akudingekile. Lona ngowodwa nje izindlela eziningana ukugcina izinwele zisesimweni esihle.
Ngocelemba ashisayo ihlala ihora nesigamu. Ngokuvamile, master siphendukezela zingu izinwele e flagella, mows amathiphu. Ugunda ungaqala nge sikelo elula, kodwa ukuphela kuyobe nje kushisa.
sikelo Zezıhlabane ebekelwa uhlelo lokushisa isiqondiso. Ngakho-ke, kuye ngohlobo izinwele, degree of ukudaya noma perming, master Uhlelo izinga lokushisa oyifunayo. Izacile, izinwele ezimhlophe abadinga lokushisa aphansi ukwedlula uqweqwe amnyama.
Wochwepheshe babé sikelo ashisayo isetshenziswe kuphela izinwele yokutakula, kodwa futhi ukwakha zezinwele imodeli. Hot insingo sikelo kwandisa nezinketho isitayela izinwele.
Kwezinye nokucwala ukuqhuba computer ukuxilongwa owandulelayo izinwele. Lokhu kuyadingeka ukuqinisekisa ukuthi eduze ngangokunokwenzeka eyolanda termonozhnits lokushisa nokubikezela ukwelashwa termostrizhkoy izinwele.
Akungabazeki ukuthi umphumela wayegunda sikelo ashisayo incike nobuchwepheshe bale okuyinhloko. Ngakho-ke kufanele ucabange kabili ngaphambi kokuzama ukuzizwa sikelo hot ekhaya. Azinikeze, ngasendleleni, futhi wonke umuntu angakwazi.
Njenganoma iyiphi izidakamizwa akukuniki Imiphumela esheshayo, futhi ngemva ukugunda izinwele sikelo esishisayo ngesikhathi esisodwa kufika umphumela ethenjisiwe. Isikhawu Kunconywa phakathi lokuqala haircuts ezintathu sikelo ashisayo - ngenyanga. Esikhathini esizayo, it zingandiswa kuze kufinyelele ezinyangeni ezine. Nokho, konke kuncike isimo izinwele. Inxanxathela Izinwele Ukwelashwa uzothola ngokushesha yokutakula umphumela: termostrizhku ukuxhumana Inkambo yokwelashwa fitopreparatami izinwele.
MSCT - kuyini? MSCT esiswini. MSCT ingqondo
Ukubambisana: idivayisi, ukulungiselelwa